Oge uto na-adị ụmụaka ka ịga ije n’ebe na-amị amị. Ụjọ na-atụ ha n’ụkwụ ọ bụla ha zọrọ, n’ihi na ha amaghị ma hà ga-ada. O nwere ike ịdị unu bụ́ ndị nne na nna ka unu megharịa ihe niile ka ha ghara ịga ụdị ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu na unu agaghị emeli ya, unu nwere ike ịghọrọ ha ebe ha ga na-ejide aka. Ọ bụ unu ga-akacha enyere ụmụ unu aka ka ha ghara ịda, meekwa ka ha ghọọ ndị dimkpa maara ihe.
I nwere ike ịsị na ọ dịghị mfe. Ọ bụ eziokwu. O nwere ike ịdị gị ka ọ̀ bụ ụnyaahụ ka nwa gị nwoke na-awụ gam gam ma na-ekwu ekwurekwu; ugbu a, ọ ghọọla nwa okorobịa na-anọrọ onwe ya, n’achọghịzi ịgwa gị okwu. N’oge na-adịbeghị anya, obere nwa gị nwaanyị na-achọkarị iso gị aga ebe ọ bụla ị na-aga; ugbu a, ọ dị ka ihere ọ̀ na-emezi ya iso gị na-agagharị!
N’agbanyeghị nke ahụ, echekwala na ọ dịghị ihe ị ga-emeli n’oge a àgwà ya na-agbanwe. O nwere ebe ị ga-esi enweta amamihe ga-enyere gị na nwa gị ezigbo aka. Ọ bụ n’Okwu Chineke bụ́ Baịbụl.
E bipụtara akwụkwọ a bụ́ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè, Nke 2, ka o nyere nwa gị aka ịtụgharị uche n’Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụrụ na ị gụọ Isiokwu Ndị Dị n’Ime Akwụkwọ A e depụtara na peeji nke 4 na nke 5, ị ga-aghọta ihe dị iche iche a tụlere n’ime ya. Ma ihe akwụkwọ a mere abụghị naanị ikwu ihe bụ́ eziokwu. Dị ka ihe atụ:
(1) Akwụkwọ a dị n’ụdị mkparịta ụka. N’ọtụtụ ebe, ajụjụ dị iche iche a jụrụ na okwu e kwuru ga-eme ka nwa gị dee ihe o chere. Dị ka ihe atụ, “Ihe M Ga-eme ma Ndị Ọgbọ M Nyewe M Nsogbu,” nke dị na peeji nke 132 na nke 133, ga-enyere nwa gị aka iche echiche banyere nsogbu ụfọdụ ga-abịara ya na ihe ọ ga-eme. Ọzọkwa, ná ngwụcha nkebi nke ọ bụla n’ime nkebi itoolu dị n’akwụkwọ a, e nwere peeji e dere “Ebe M Ga-ede Ihe,” bụ́ ebe nwa gị ga-ede ihe ọ ghọtara na ihe o chere banyere ihe ọ gụrụ ná nkebi ahụ.
(2) Akwụkwọ a ga-eme ka gị na nwa gị na-ekwurịta okwu. Dị ka ihe atụ, e nwere igbe bụ́ “Olee Otú M Ga-esi Agwa Papa M Ma Ọ Bụ Mama M Okwu Gbasara Mmekọahụ?” nke dị na peeji nke 63 na nke 64. Ná ngwụcha isiokwu ọ bụla, e nwekwara igbe bụ́ “Gịnị Ka I Chere?” Igbe a abụghị naanị ihe e ji atụleghachi ihe a gụrụ, ezinụlọ nwekwara ike iji ya kwurịta okwu. Isiokwu nke ọ bụla nwekwara ebe e dere “Ihe M Ga-eme!” nke ebe ngwụcha ya ga-agwa nwatakịrị ka o dee ihe ọ chọrọ ịjụ papa ya ma ọ bụ mama ya n’ebe ahụ e dere: “Ihe m chọrọ ịjụ papa m ma ọ bụ mama m banyere okwu a bụ . . . ” Ọ ga-eme ka ndị na-eto eto na-agakwuru papa ha na mama ha ka ha nye ha ezigbo ndụmọdụ ndị ga-enyere ha aka ịgafe oge a siri ike ha ka na-eto eto.
Ndụmọdụ: Ka ụmụ gị nwee ike ide ihe bụ́ eziokwu n’akwụkwọ nke ha, hapụrụ ha nke ha. E mechaa, ha nwere ike ịkọrọ gị ihe ha dere.
Nwee akwụkwọ nke gị, ma gụọ ya nke ọma. Mgbe ị na-agụ ya, gbalịa icheta nsogbu niile, mgbagwoju anya na nchegbu niile i nwere mgbe ị na-eto eto. N’oge kwesịrị ekwesị, kọọrọ ụmụ gị ihe ndị a. Ọ ga-eme ka ụmụ gị na-akọrọ gị nsogbu ha na-enwe. Mgbe ha na-akọrọ gị nsogbu ha, gee ha ntị! Ọ bụrụ na o yie ka mgbalị ị na-eme ka gị na ha na-ekwurịta okwu enweghị isi, ike agwụla gị. N’agbanyeghị na o nwere ike iyi ka ha achọghị ịnabata ndụmọdụ gị, ụmụaka na-aka anabata ndụmọdụ papa ha na mama ha nyere ha karịa nke ụmụaka ibe ha nyere ha.
Obi dị anyị ụtọ iwepụtara gị na ụmụ gị akwụkwọ a dabeere na Baịbụl, anyị na-ekpekwa ekpere ka ọ baara ezinụlọ gị ezigbo uru.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Ndị Nne na Nna Ga-eburu n’Obi